Phantse wonke ummeli wesetyhini unentlonelo kwietekisi ezahlukeneyo. Kodwa ngokuqhelekileyo isidingo sobumnandi senzeka ngokukhawuleza emva kwexesha, ngeli xesha apho kukho ukungqinelana. Wonke umntu uyazi ukuba into emnandi iyingozi kumfanekiso, kwaye ngamnye umfazi angathanda ukukholelwa ukuba kukho enye inketho yokutshintshwa. Ingaba kuyimfuneko ukuba uzikhanyele ubuthathaka obunjalo bokulondolozwa komfanekiso?
Iingoma zeswekile ezikhoyo
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iikhoksi ezinobungozi okanye ezingenakusizi azikho. Inendima ebalulekileyo apha idlalwa kuphela ngumlinganiselo weshukela kunye nomthamo we-carbohydrate ekhanyayo. Kufuneka kwakhona ukuba ingqalelo ukuba into ecolileyo iyimfuneko emzimbeni wethu, kuba ngaphandle kokushukela ayikwazi ukusebenza kakuhle. Kodwa kuyaziwa ukuba abaninzi abafazi badla ngokugqithisa isiqhelo esimiselweyo sokusetyenziswa kwamnandi. Ngenxa yoko, kwizidlo ezahlukileyo kwaye zigqityiwe ngokutsha.
Kufanelekile ukubeka ingqalelo kwizinto eziphambili. Ngokomzekelo, i-carbohydrate elula - i-fructose, i-glucose kunye nezinye iishukela. Ii-carbohydrate zolu hlobo zicebisa intlawulelo yeziqhamo kunye nemifuno, okwenza zibe mnandi. Kukho izixhobo eziyinkimbinkimbi kakhulu, ezifana ne-sucrose, eyishukela ephuma kwiibhere okanye umhonkco; i-lactose, ineshukela equlethwe kubisi. Kukho isishu edibeneyo edibanisa amawaka eemeleleksi, umzekelo, i-glycogen, efana nesilwanyana kunye nesitashi - ngumfuziselo wemifuno.
Kukuphi uhlobo lwe-carbohydrate engaphathwa ngayo, emzimbeni abo bonke baqala ukwahlukana, benza i-glucose baze bangena egazini. I-Avot yokucoca kwe-glycogen okanye isitashi ithatha ixesha elithile, ngoko ke, umxholo we-glucose uyanda ngokukhawuleza. Xa iswekile ihlula kwi-organism, i-glucose level iphakama ngokukhawuleza, kwaye umzimba uqala ukuqhuba ubuninzi, kwaye uqala ukuguqula ibe yindlela efana neoli. Ngoko isiphelo sithathwa ngengozi yeswekile.
Ukuphikisana ngezinto eziye zathethwa, kunokucingelwa ukuba kulolu hlobo, iswekile yeemveliso ezilula zi luncedo. Kodwa, kuzuko olukhulu oku akunjalo. Emva kwakho konke, umzekelo, isitashi asinanto enomdla. Andiyitholi nayiphi na into yokuzonwabisa.
Ngaloo ndlela, iimveliso kunye nomxholo we-fructose kunye ne-glucose zizinto ezibonakalayo zintengiso.
Ungenza njani ukuba ube mnandi mncinane?
Ngokuqinisekileyo yonke intombazana ifuna ukuzithoba ngeqhekeza okanye iqengqele lekhefu ngentaka yekhofi okanye itiye. Ngaphezu koko, mnandi ungumncedi omhle kwixesha elixinzelelekileyo, unike umqondo wokwaneliseka nokuzola, ngelixa uphakamisa umoya. Ngaloo ndlela, ngokulingana okuncinci, kunokwenzeka ukuba uvumeleke ukuba ube ngumsila.
I-Zephyr ibonakala njengomkhiqizo ocebileyo kwaye unomsoco. Kufuneka ukhethe i-classic marshmallow, kuba iqulethwe yendalo kuphela.
Uncedo ngokukodwa ukwakhiwa kwayo. I-Zephyr ilungiselelwe ngesiseko se-apple puree kunye ne-carbohydrate eyinkimbinkimbi, njenge-acid acid-split isitashi, oko kukuthi, ubuninzi bayo buninzi. Kwakhona ukuveliswa kwama-marshmallows kunokuthiwa kunye neqanda elimhlophe kunye noshukela oluyimpuphu. Loo mveliso ekuqhekekeni kweswekile kudinga ixesha elininzi, ngoko ke, i-marshmallows eninzi imilinganiselo ayikwazi ukulimaza isiqalo sakho.
Iilekese kunye nazo zonke i-marmalade ethandekayo.I -redpochtenenie kufuneka inikwe ngqo kwisiqhamo sendalo, ngaphandle kokufafaza ushukela. Izixhobo zalo ziquka i-gelatin, i-pectins, eyanceda ukugaya, kunye ne-apple cleanes. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba isithako esibalulekileyo siyi-fructose ekulungiseleleni iziqhamo zemvelo zendalo. I-Fructose iyishukela evamile ephindaphinda kwi-body of glucose.
I-Pastila ekubunjweni kwayo ifana kakhulu ne-marshmallow, kodwa isixa sesithwathwa sisininzi, ngoxa uncedo lwaloo pastille kunye nesimo esifanayo kunye nesinambitha. Ngokuqhelekileyo, amajikijolo, zonke iintlobo zeziqhamo zongezwa kwi-pastille, ezalisekisa ubumnandi kunye nephunga elimnandi kunye nefuthe lemvelo. Ngokuphathelele isiseko esixineneyo, senziwa ngokudibanisa i-jelly kunye namaqanda abamhlophe.
Iimpawu zeesekese zaseMpuma
Imveliso enoncedo equkethe iswekile, ithwala iziqhamo zasempuma, ukhuphe i-jam kwi-petals ye roses kunye ne-halva. Ngokuphathelele nawaphi na iipesele ezifanayo, unobusi, ama-nut okanye ama-raisins ekubunjweni kwawo, kunye nazo zonke iintlobo zonunci. Ekubeni kuninzi, ukutya okunjalo kunzima kunzima, kuba iisuthi kunye neerinki zinika ukuvakalelwa.
Izidalwa ezintle ziyakudla kunye nobusi, okuyimveliso yamagalebhiledi ewusizo. Inyosi inokuthi ifakwe kwitiyi, kuba inokuthi ithathe kalula ishukela.
Ikhekhe lezithelo lukhethi olukhethekileyo lwezinyo ezinomsoco. Kubalulekile ukuphepha ama-biscuits, iigwele ezisebenzise ukhilimu ogwetshiwe, apho, ngaphezu kwe-ushukela, ixabiso elininzi leoli liqulethwe.
Iimpawu zeshokoleta emnyama
Icolethi yemvelo inezixhobo ezinobungakanani ezahlukeneyo. Kwi-tsholeta enomrakalo iqukethe iipesenti ezingamashumi asibhozo zecocoa. Zonke ziqulethe inani elikhulu lamafutha, imvelaphi yemifuno, kunye noshukela we-soy.
Abantu abanamathele ekudleni, banako ukufumana izithelo ezomileyo, ezinomthombo wendalo kuphela, kungenxa yoko kubalulekile. Kwiimveliso ezinjalo zinokuthiwa ziingcawa, iintsuku, ama-apricots omisiwe - ziqukethe inani elikhulu leekhalori, kodwa kunzima ukutya ngaphezu kweqhelekileyo.
Kwakhona i-pudding ekhulayo, i-jelly, kunye neefowuni ezahlukeneyo, isiseko esine-yoghurt esingenasiphunga, singabonwa njengeluncedo.
Konke malunga ne-Thai cuisine
Indlela yokuhlaziya i-mascara
Inkukhu yempuphu kunye noshizi ocibilikileyo kwivenkile ye-microwave
Yintoni elindele iLibra ngo-2014
Okumnandi kakhulu ukususela ngoSeptemba 1 kubazali: kwindinyana kunye neprose, kubathishela, kwi-school-classers and graders, efutshane kunye ne-SMS
Ingulube ihamba ngeeshizi kunye namakhowe